I-Ture Union Ball Valve
PVC Hlola Valve
Okuzenzakalelayo Hlunga Station
Drippers Futhi Sprinkler
Ama-Big Gun Sprinklers
Mini Valve Futhi nokufaka
Abafaka Umanyolo Venturi
PVC LayFlat Hose Futhi nokufaka
AmaGreenPlains, Njengomunye wabakhiqizi bemikhiqizo yokunisela ekhethekile esungulwe ngo-2009, uzibophezele ekuhlinzekeni izixazululo zemikhiqizo yokunisela kubasebenzisi bomhlaba jikelele. Sihola imboni ngekhwalithi ephezulu yomkhiqizo nedumela elihle emakethe yamazwe omhlaba.
Ngemuva kweminyaka engaphezu kwengu-10 yentuthuko eqhubekayo kanye nokuqanjwa kwezinto ezintsha, iGreenPlains isibe ngumkhiqizi womkhiqizo wokunisela owaziwayo waseChina. Emkhakheni wokwenziwa kwemikhiqizo yokunisela, iGreenPlains isungule ubuchwepheshe bayo obuholayo nezinzuzo zomkhiqizo. Ngokuya nge-PVC valve, Filter, Drippers, neMini Valves and Fittings, iGreenPlains isiphenduke isiShayina enye yemikhiqizo ehamba phambili.
IGreenPlains igxile ku-R & D, ekukhiqizeni nasekukhangiseni imikhiqizo yokunisela. I-workshop yokukhiqiza inezikhunta ezingaphezu kuka-400. Okukhiqizwayo kufaka phakathi i-PVC Ball Valves, i-PVC Butterfly Valves, i-PVC Check Valves, i-Foot Valves, i-Hydraulic Control Valves, i-Air Valve, i-Filter, i-Drippers, i-Sprinklers, i-Drip tape, ne-Mini Valves, i-Fittings, i-Clamp Saddle, i-Fertilizer Injectors Venturi, i-PVC LayFlat Hose kanye Ukufakwa, amathuluzi neminye imikhiqizo eminingi. Imikhiqizo eminingi kanye nobuchwepheshe buthole amalungelo obunikazi kazwelonke.
Ithimba le-R & D lochwepheshe, sinikezela ngesevisi eyodwa yokumiswa komkhiqizo, ukwakheka kwesikhunta nokwakha ekwakhiweni komkhiqizo;
Sithole isitifiketi sohlelo lwekhwalithi ye-ISO9001 kusuka ku-SGS. Sifaneleke ngezinhlelo zokuphatha ezithuthukile kanye namaqembu okuphatha asezingeni eliphakeme. Siqapha futhi silandelele yonke inqubo kusuka ekubekweni kwe-PO kuye ekulethweni kwezimpahla kuwo wonke ama-oda nge-ERP, MES, uhlelo lokuphatha lokugcina izinto kanye nohlelo lwekhwalithi le-ISO9001; silawula ikhwalithi yawo wonke umkhiqizo owodwa futhi sinikezela ngemikhiqizo engabizi kakhulu nensizakalo yamakhasimende ethu emhlabeni wonke.
Ubani thina Ingabe kunjalo?
AmaGreenPlains, njengomunye wabakhiqizi bemikhiqizo yokunisela ekhethekile esungulwe ngo-2009. uzibophezele ekuhlinzekeni izixazululo zemikhiqizo yokunisela kubasebenzisi bomhlaba jikelele. Sihola imboni ngekhwalithi ephezulu yomkhiqizo nedumela elihle emakethe yamazwe omhlaba.
Kuzo yiwaphi thola thina?
Indawo Yezimboni zeBafang, iDacheng, iLangfang City, Isifundazwe saseHebei, eChina
Imibuzo mayelana nemikhiqizo yethu noma pricelist, sicela ushiye ikheli lakho kithi thina sizothintana kungakapheli amahora angama-24.
Kusuka ku- Instagram
Sisebenzisa amakhukhi ukwengeza ukwakheka kwewebhusayithi yethu. Ngokuqhubeka nokuvakasha kwakho kuwebhusayithi, uyavuma ukusetshenziswa kwamakhukhi. [Imininingwane engaphezulu]KULUNGILE